“Barcelona way sii socon doontaa kaddib bixitaankii Lionel Messi” – Ronald Koeman – Gool FM
“Barcelona way sii socon doontaa kaddib bixitaankii Lionel Messi” – Ronald Koeman
Haaruun August 9, 2021
(Barcelona) 09 Agoosto 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa carrabka ku adkeeyay inay sii socon doonto kooxda kaddib bixitaankii hoggaamiyaha taariikhiga ah ee Lionel Messi, kaasoo xiriirkii uu la lahaa kooxda uu si rasmi ah u dhammaaday, kaddib muddo dhan 21 sano uu ku qaatay garoonka Camp Nou.
Hadalka Koeman ayaa yimid kaddib markii Barcelona ay ku guuleysatay koobka saaxiibtinimo ee Joan Gamper Trophy, kaddib markii ay 3-0 kaga adkaadeen kooxda reer Talyaani ee Juventus, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaha kala ah Memphis Depay, Martin Braithwaite iyo Riqui Puig.
Haddaba Jariiradda “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacday wareysi uu bixiyay Macallin Ronald Koeman kaddib ciyaarta, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa:-
“Waa wax iska caadi ah in marka uu Messi baxo, ay ku adkaan doonto qof walba, laakiin waa inaan hore u soconnaa sababtoo ah ma beddeli karno xaaladda.”
“Waa inaan si fiican u ciyaarnaa oo aan si adag u shaqeynaa, waxaa jira ciyaartoy kale oo ka ciyaari kara booskiisa oo door muhiim ah kaga ciyaari kara kooxda.”
“Hadda ma haysano Messi, si kastaba ha ahaatee waa inaan horay u soconnaa oo aan fiirinnaa.”
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay inuu ammaanno ciyaaryahankiisa cusub ee Memphis Depay, waxa uuna yiri: “Waan la saxiixannay, wuxuuna maanta muujiyey inuu dhab ahaantii noqon karo mid saamayn leh”.
Muddada la filayo inuu Sergio Aguero ka maqnaan doono Kooxda Barcelona oo la sii ogaaday
RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay muddada uu garoommada ka maqnaan doono Sergio Agüero